ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးများ ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားစရာ ဥပမာ
မြန်မာ အမျိုးသမီးလေးများ ဘ၀ကို တန်ဖိုးထားစရာ ဥပမာ
အရေးကြီးတယ်နော် …… ပြီးတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက တစ်စုံတစ်ခုကို အင်္ဂျာီအိပ်ထဲကနှိုက်ပြီး လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတာသိချင်လားလို့ သမီးဖြစ်သူကို မေးတယ်။
သမီးဖြစ်သူက ခေါင်းညှိက်တဲ့အခါမှာတော့ . . .
ဒါဆို သမီး ထိုင်ထ ၁ ခေါက်လုပ် . .
သမီးဖြစ်သူက ထိုင်ထ လုပ်လဲပြီးရော ဖခင်ဖြစ်သူက ၃ ခေါက်လုပ်မှပြမယ်လို့ ဆိုပြန်တယ်။
သမီးဖြစ်သူကလုပ်လဲပြီးရော ၅ ခေါက်လုပ်မှပြမယ်လို့ ဆိုပြန်တယ်။
သမီးဖြစ်သူကလဲ ၅ ခေါက်လုပ်ပြန်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက ၁၀ ခေါက်အထိ ဆိုလာပြန်တယ်။
ထိုအခါ သမီးဖြစ်သူက ၁၀ ခေါက်လုပ်ပြီးတော့ . . အဖေရယ် သမီးကို ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပြပါတော့လို့ ဆိုတယ်။
အဲ့ဒီတော့မှ ဖခင်ဖြစ်သူက လက်ထဲမှာဆုပ်ကိုင်ထားတာလေးကို ဖွင့်ပြလိုက်တော့ အကြွေတစ်မတ်စေ့ ဖြစ်နေတယ်။
အဲ့ဒီအကြွေစေ့လေးကိုပဲ လက်ထဲမှာ နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးတော့ သမီးဖြစ်သူကို ထိုင်ထ ၁၀ ခေါက်လုပ်ရင်ပြမယ်လို့ ပြောပြန်တယ်။
သမီးဖြစ်သူက . .
မကြည့်ချင်ပါဘူး . . သမီး ကြည့်ပြီးပြီပဲဟာ .. လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ထိုအခါ ဖခင်ဖြစ်သူက ၁ ခေါက်ပဲလုပ်ပါ သမီးရယ် .. အဖေ ပြပါ့မယ်လို့ ဆိုသတဲ့။
၁ခေါက်လဲမလုပ်နိုင်ဘူး . . တွေ့ပြီး မြင်ပြီးသားပဲဟာလို့ သမီးကပြန်ပြောသတဲ့။
ဒါဆို အလကားပဲပြမယ်သမီးရယ် . . ကြည့်မလားလို့ ဖခင်ကပြန်မေးတယ်။
အလကားလဲ မတွေ့ချင်ပါဘူး . . တွေ့ပြီးမြင်ပြီးသွားရင် ဘာတန်ဖိုးရှိတော့တာမှတ်လို့… ဆိုပြီး သမီးဖြစ်သူက ပြန်ပြောတယ်။
အဲ့ဒီတော့မှ ဖခင်ဖြစ်သူက …
ဒီဥပမာလေးလိုပဲ သမီးရယ် . . မတွေ့ခင် မမြင်ခင်က တန်ဖိုးကြီးမားပြီး လိုသလို ခိုင်းလို့ရတဲ့ ဒီမတ်စေ့လေးဟာ တွေ့မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူး မဟုတ်လား …
ဒီလိုပဲ သမီးရေ . . .
ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသင့်တဲ့ အရာတွေကိုလဲ အချိန်မတန်ခင်မှာ တန်ဖိုးမဲ့သွားအောင် သူတစ်ပါးကို ပေးမမြင် ပေးမတွေ့သင့်ဘူး. . .
သမီးတို့ရဲ့ … အပျိုစင်ဘ၀ကိုလဲ ဒီမတ်စေ့လေးလိုပဲ အချိန်မတန်ခင် တန်ဖိုးမဲ့သွားအောင် သူတစ်ပါးကို ပေးမမြင် ပေးမတွေ့သင့်ဘူး။
အမျိုးကောင်းသမီးများ ပေါ်ထွန်းလာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်………………